INZULULWAZI ILINGANISA INDLELA YOKUBILISA AMANZI ETI - INZULULWAZI
X Iqela Lamadoda
Ukubuyisa Kwakhona Ii-80S
Carol Kwezinye Iilwimi
Inzululwazi ilinganisa owona mxholo ubalulekileyo: Ungawabilisa njani amanzi iti
Ngamanye amaxesha oososayensi bafunda ukuhamba kweenkwenkwezi okanye baqikelele ixesha lokuqhuma kweentaba-mlilo okanye fundisa iimpuku ukuqhuba . Kwaye ngamanye amaxesha, benza umsebenzi obalulekileyo njengokuhamba bangene kwindawo enempikiswano kunye nokwenza ingxelo ecacileyo yesayensi malunga nendlela yokwenza kakuhle ikomityi yeti.
Kuxhomekeke kwiikona ezonakeleyo ze-intanethi ohamba kuzo, usenokuba sele uyazi Ingxoxo-mpikiswano yeTi enkulu. Kukungqubana okudala njengaye, ewe… hayi ixesha kodwa ubuncinci njengendala njengemilo ye-intanethi. Kwaye njengakunyibilika okuninzi kwe-Twitter, ezinye zazo zinokulandelwa kwi-troll extraordinaire kunye ne-comic legend Gail Simone. U-Simone ulungile-ehlekisa ngabalandeli bakhe ngalo lonke ixesha malunga nendlela iBrits ezenza ngayo iti. Yeyiphi kwi-microwave kunjalo!
Umbuzo obalulekileyo kubalandeli bam baseBritane. Siye sonwaba ngesi sihloko, kodwa oku kuyinyani.
Uliyeka nini iLipton yakho ukuba inyibilike kwindebe emva kokuhambisa amanzi?
-Gail Simone (@GailSimone) Epreli 14, 2019
I-Bhritane ngokukodwa ibonakala ngathi iyaphambana xa umntu ecebisa ukwenza iti ngemicrowave. Kwaye xa ividiyo yeTikTok yaya kwintsholongwane kwangoko kulo nyaka iphakamisa oku, bahamba amantongomane ngokupheleleyo. (Nangona ngokucacileyo oku kuyinyathela!)
@ jchelle36 Iti eshushu le ntombazana yaseMelika iyayithanda & # x1f60a; # # americanintheuk ## fyp @noluyolo Isandi sentsusa - jchelle36
Kwakhona, yayingezizo izithako ezenza ukuba iBritane iphambane: yayiyi-microwave. Kubonakala ngathi babedidekile yile ngcamango yokuba abanye, ukuba uninzi, baseMelika abanazo iiketile zombane (okanye naziphi na iiketile!) Kwaye bashushu nje amanzi kwimicrowave. Yinkani leyo! Amanzi aphola ngokukhawuleza okukhulu ngokutsho kwabanye, kwaye ayifani, yitsho abanye.
Ngoku, ungasoloko uzama indlela YAM yokwenza iti: ubilise amanzi, ulibale ngayo, uphinde ushushu amanzi, beka iti emanzini ukuze uyele, ulibale ngayo, uthathe iti ebandayo uze ufumane ikofu. Iindlela zakho zekhosi zinokwahluka.
Ngoku, inzululwazi ingenelele ukulungisa impikiswano , kwaye, kunjalo, bavela kwelinye ilizwe abanomdla onikwe iti: China. Kodwa abasebenzisi be-microwave abasebenza nzima akufuneki bazithobe iintloko zabo ngeentloni. Oososayensi kwiYunivesithi ye-Elektroniki yeNzululwazi kunye neTekhnoloji yase China bapapashe isifundo kwi-AIP Advances evela kwiAmerican Institute of Physics ijenali engqina ukuba amanzi afudunyezwa kwimicrowave ahlukile kumanzi afudunyezwa ngeketile!
Ke, amanzi abilisiwe ngeketile (okanye nasiphi na esinye isikhongozeli esisebenzisa ubushushu emazantsi) afudunyezwa yinkqubo eyaziwa ngokuba kukuhambisa umbona. Unokuba ne-oven yokuhambisa, esebenzisa ifeni ukujikeleza ubushushu ngokulinganayo. Yiloo nto inye eyenzekayo emanzini abiliswe ngeketile: amanzi abhekisa emazantsi afudumeza kwaye ulwelo olushushu aluminyani kangako ngoko luyenyuka kwaye ulwelo olubandayo luyatyhalwa luze lufudumale kwaye ufumane amanzi afudunyezwe ngokulinganayo.
Inenekazi limangalela i-mcdonald's yekofu
Amanzi abiliswe kwimicrowave akasebenzi njalo kuba ii microwaves ( Ezizezimo zemitha ) ukufudumeza amanzi ngokukhawuleza… kodwa ngokungalinganiyo, kuba akukho convection kuba umthombo wobushushu ujikeleze. Nanku ukubonwa kolu phando. Amanzi asekhohlo abilisiwe ngendlela eqhelekileyo, amanzi ngasekunene kwimicrowave.
Ke oko kuhlala ngoko. Amanzi avela kwiketile angcono!
Ewe, hayi, kuba kuyacaca Ukufudumeza iti kwimicrowave kunokuba bhetele ekufunxeni izakhamzimba eziphambili Kwaye kwakhona, ayinguye wonke umntu oneketile. Ke abaphandi baseTshayina banesisombululo: irim entsonkothileyo yetiacup esebenzisa isilingi sokulinganisa ukulinganisa. Ewe ewe, ezi nzulu-lwazi ziyile isincamathiselo kwikomityi okanye kwisikhongozeli ukulinganisa iimpembelelo ezinokuthi ziveliswe nangubani na ...
Ke nangona wenza kwaye uthatha iti, khumbula nje ukuba kukho abantu kumazwekazi amaninzi abatyala ixesha elininzi kunye namandla okwenza ngendlela elungileyo. Nokuba uyonwabela njani into eya kuhlala ikho umntu kwi-intanethi akuxelele ukuba uyenzile kakubi kwaye isazinzulu senza indlela enzima kakhulu yokwenza into enokuphunyezwa ngento elula njengokuvuselela.
Uyenza njani iti yakho?
(nge CNN , umfanekiso: UJim Henson Studios)
Intombazana Ihamba Yodwa Igoduka Ebusuku
Umphindezeli Wobudala Be-Ultron
Ukuhlaziywa: I-US Airways ivele ikhuphele nje umfanekiso weNdiza ekuHanjelwe kuyo i-NSFW kakhulu
Kutheni i-Heck ingazange i-Old Guard ibe yi-Greenlit kwi-Sequel?
Yintoni isihogo Amaxesha Ambi e-El Royale malunga? Uphando
Amaxesha Amabi E-El Royale
I-skyrim pirates ye-caribbean
khan khonkxiwe yimfama kukukhanya
ellen ufunda i-50 shades yegrey
iintaka zebhokisi yamaxhoba mojo
UJennifer lopez uvumela phezulu